Trump oo joojinayo barnaamijka oggolaanaya inay sii joogaan boqolaal kun oo qaxooti ah - Horn Future
Trump oo joojinayo barnaamijka oggolaanaya inay sii joogaan boqolaal kun oo qaxooti ah
Washington(Horn Future)-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa go’aansaday in uu joojiyo barnaamijka u oggolaanaya boqolaal kun oo qaxooti sharci darro ah inay sii joogaan gudaha Mareykanka,iyada oo uu siiyay muddo 6 bilood Congress-ka si ay u ugu helaan sharci kale ah.
Ilo wax ka og arrintan ayaa sheegaya in Trump go’aansaday inuu dib u dhigo in la dhaqan galiyo ah in go’aankiisa in la joojiyo barnaamijkan si uu u siiyo fursad Congress ka fursad si ay usoo saaraan sharci gala baddilkiisa ka hor inta uunan dhammaan wakhtiga kama dambeysta ah.
Xildhibaanno badan oo Jamhuuriyiin ah ayaa ka digay joojinta barnaamijka loogu magac daray “Dreamers”, kaas oo lagu sameeyay qaraar uu sexeexay madaxweynihii hore Barack Obama sannadkii 2012, iyada oo qaar ka mid ah Jamhuurigu ay ka soo horjeedaan oo ay ku tilmaameen “cafis” aanan lahayn marmarsiiyo.
Wargayska New York Times ayaa sheegay in Trump uu si dhab ah u darsayo qorshe lagu joojinayo barnaamijkan 6 bilood kadib, laakiin saraakiil ayaa ka digtay inuu mar kale badilo karo maankiisa.
Barnaamijkan ayaa looga golleeyahay in lagu masaafuriyo soogalootiga aanan caadiga ahayn ee yimid wadanka Mareykanka ka hor intii aynan da’doodu gaadhin 16 sanadood,kaas oo imika ahaan ka ilaalineya 800 kun oo qof in dib loo celiyo iyaga la siinayo oggolaansho joogitaan 2 sanadood ah oo loogu talagalay waxbarasho ama shaqaaleynta.
Waxa tobonaan kamid ah hoggaamiyayaasha shirkaddaha waa wayn ee Mareykanka ay ka digeen warqad furan oo ay direen Mareykanka waxyeellada dhaqaale iyo in la joojiyo hawlgalinta barnaamijkan,iyaga oo ku qiyaasay khasaaraha kasoo gaadhya in ka badan( $ 460 billion) milyaar oo dollar,halkaas oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan oo uu saameeynayo barnaamijkan.
« Weerar takoor ah oo lagu qaaday maanta oo Isniin ah dugsi Islaami magaaladda Amsterdam	» Kenya: Opposition spurns new date for presidential poll